एलन मस्कले के भने, जसका कारण फेरि चुलियो बिटक्वाइनको मूल्य ? – Charchit Entertainment
काठमाडौं । टेस्ला तथा स्पेस एक्स कम्पनीका सिइओ एलन मस्कको एक वचनको प्रभावले डिजिटल क्रिप्टोकरेन्सी बिटक्वाइनको मूल्यमा पुनः उछाल आएको छ ।
टेस्लाको कारोबारमा भविष्यमा बिटक्वाइनको भुक्तानी स्विकार गर्न सकिने भनी मस्कले बताएसँगै बिटक्वाइनको मूल्य बढेर प्रतिक्वाइन ३० हजार डलर नाघेको हो ।
विद्युतीय कार निर्माता कम्पनी टेस्लाले बिटक्वाइन स्विकार गर्न नसकिने भनेर गत मे महिनामा बताएसँगै बिटक्वाइन धरासायी बन्दै गएको थियो ।
बिटक्वाइन माइनिंगमा उच्च मात्रामा ऊर्जा खपत हुने भन्दै त्यस्तो प्रदूषक मुद्रालाई भुक्तानीमा स्विकार गर्न नसकिने टेस्लाले बताएको थियो ।
तर क्रिप्टो काउन्सिल फर इन्नोभेसनले गरेको द बी वर्ड सम्मेलनका क्रममा मस्कले आफूसँग क्रिप्टोकरेन्सी रहेको र टेस्लाले भविष्यमा भुक्तानीका क्रममा क्रिप्टोकरेन्सी स्विकार गर्न सक्ने बताएका थिए ।
साथै एनले बिटक्वाइन माइनिंगमा जिवाश्म इन्धनको खपतका विषयमा अनुसन्धान पनि भैरहेको बताएका छन् ।
मस्कले भने– मैले यो कुरा पुष्टि गर्नका लागि केही थप परिश्रम गर्न चाहन्थें कि नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगको हिस्सा ५० प्रतिशत वा त्यो भन्दा बढी छ वा छैन ? र, उक्त प्रतिशतलाई बढाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । यदि यस्तो भएमा टेस्लाले बिटक्वाइन स्वीकार गर्न पुनः सुरु गर्नेछ ।
टेस्लाका केही लगानीकर्ता तथा पर्यावरणविदहरुले यसअघि बिटक्वाइन स्वीकार गर्ने टेस्लाको निर्णयको आलोचना गरेका थिए ।पर्यावरणमैत्री भनिने टेस्लाका गाडी खरीद गर्नका लागि पर्यावरणका लागि खतरनाक मानिने क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोगलाई अनुमति दिने टेस्लाको निर्णय विरोधाभाषी भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
बिटक्वाइन माइनिंग गर्नका लागि ठूलो परिमाणमा ऊर्जाको प्रयोग हुन्छ । त्यसको ठूलो हिस्सा जिवाश्म इन्धनबाट उत्पादन हुने गरेको छ ।
स्मरण रहोस् एलन मस्क क्रिप्टोकरेन्सीका समर्थक रहँदै आएका छन् । उनीमाथि क्रिप्टोकरेन्सीको लोकप्रियता बढाउनका लागि आफ्नो प्रभावको प्रयोग गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । साथै विभिन्न फन्डा गरेर क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य कृत्रिम रुपले बढाउने र त्यसरी बढेको मूल्यमा बेच्दै नाफा कमाउने गरेको आरोप पनि उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । तर मस्कले भने आफूले मूल्य बढाउने र त्यसलाई फेरि बेच्ने कुरामा विश्वास नगर्ने भन्दै आफूले बिटक्वाइन सफल भएको देख्न चाहने जिकीर गरे ।
बी वर्ड कन्फ्रेन्समा मस्कले आफ्नो कम्पनी टेस्ला र स्पेस एक्ससँग पनि बिटक्वाइन रहेको बताए । साथै आफूले अन्य क्रिप्टोकरेन्सीहरु इथेरियम र डोजक्वाइनमा पनि लगानी गरेको उनले खुलासा गरे ।
उक्त सम्मेलनमा ट्वीटरका सिइओ ज्याक डोर्सी तथा एआरके म्यानेजमेन्टका प्रमुख क्याथी वुड पनि सहभागी थिए ।
उक्त सम्मेलनमा मस्कको टिप्पणीसँगै बिटक्वाइनको मूल्य ६ प्रतिशतसम्म बढेको छ भने इथेरियमको मूल्य १०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।